Froala: Ampitomboy ny sehatr'asanao amin'ny WYSIWYG mpanoratra an-tsoratra manan-karena feno | Martech Zone
Zoma, Febroary 19, 2021 Zoma, Febroary 19, 2021 Douglas Karr
Raha efa nanomboka ny làlana mamolavola sehatra iray ianao izay ilana tonian-dahatsoratry ny lahatsoratra izay-ianao-mahita-inona-no-azonao (WYSISYG), fantatrao fa sarotra be izany. Fony aho niasa tamina mpamatsy tolotra mailaka, ny asa hamoronana sy hizaha toetra tonian-dahatsoratra iray izay niasa mba hanomezana valiny, mailaka avy amin'ny client-client HTML dia namoaka famoahana maromaro hamerenana sy hanitsiana. Tsy mora izany.
Ny tonian-dahatsoratry ny lahatsoratra dia iray amin'ireo singa tianao hampidirina ao anaty sehatra iray izay manatsara be ny atiny voasambotra, saingy tsy tokony hitaky fivoarana amam-bolana na taona maro. Tonian-dahatsoratra Froala dia tonian-dahatsoratra manankarena haingana mirehitra izay maivana, voarindra tsara, azo antoka ary mora ho an'ny ekipan'ny fampandrosoana ho tafiditra ao anatin'ny rehetra rafitra malaza.
Famolavolana maoderina - interface tsara maoderina izay ho tian'ny mpampiasa fotsiny.
Retina Vonona - antsipiriany bebe kokoa, estetika tsara kokoa ary endritsoratra maranitra.
lohahevitra - Ampiasao ny default na ny maizina lohahevitra, na mamorona ny lohahevitra anao manokana amin'ny fampiasana ny rakitra LESS lohahevitra.
Intuitive Interface - Froala tonian-dahatsoratra manankarena Froala dia manolotra fampiasa feno amin'ny alàlan'ny interface intuitive izay ho hitan'ny mpampiasa fa voajanahary ampiasaina.
popups - popup vao misondrotra ho an'ny traikefa nahafinaritra an'ny mpampiasa.
Lalao SVG - sary an-tsaina SVG vita an-trano, sary masina azo ovaina azo zahana amin'ny habeny.
Custom Style - Ny editor WYSIWYG HTML no hany tokana manana fitaovana manokana hanovana azy hanovana ny endrika sy hahatsapa ny fomba tianao.
Fitaovana manokana - bokotra be loatra ve? Angamba tsy amin'ny filaharana mety? Manana fifehezana feno momba ny fiasan'ny bikan-tsarin'ny editor amin'ny haben'ny efijery tsirairay ianao.
Custom ho an'ny rehetra - Ny zava-drehetra dia azo namboarina na namboarina manokana: bokotra, dropdowns, popup, sary famantarana, hitsin-dàlana.
Fitaovana miraikitra - Mba hanamorana ny fanandramana fanovana nataonao dia hijanona eo an-tampon'ny efijery ny biraon'ny mpampanonta WYSIWYG mandritra ny dianao hidina.
Officiel Offset - Tsy mila mifanindry amin'ny lohateny ao amin'ny pejin-tranonkalanao ny bikan'ny fanonta an-tsoratra manankarena fa manamboatra offset fotsiny ho azy.
Fitaovana eo ambany - Amboary mora foana ny toeran'ny biraon'ny mpanonta HTML WYSIWYG avy any ambony ka hatrany ambany, ary koa ny baravarana miraikitra na offset.
Mameno efijery - Ny fiatrehana atiny betsaka dia mitaky habaka fanovana lehibe. Ny bokotra fitaratra feno dia hanitatra ny faritra fanovana amin'ny habaka webpage iray manontolo.
Feno pejy - Azo atao koa ny manoratra sy manitsy pejy HTML iray manontolo. Manampy amin'ny mailaka, fa tsy ny fampiasana HTML, HEAD, tag BODY ary fanambarana DOCTYPE ihany no avela.
iframe - Ny atin'ny mpampanonta HTML WYSIWYG dia azo esorina amin'ny pejy sisa amin'ny fampiasana iframe ka tsy misy fomba na fifanoherana script.
Fôtôla fampisehoana Editor Froala
Fast - Enina heny haingana noho ny indray mipy maso, ny mpanoratra lahatsoratra manankarena dia hanomboka hatrany amin'ny 40ms.
maivana - Amin'ny alalàn'ny 50KB ao anatiny ihany, azonao atao ny mitondra traikefa fanovana mahavariana amin'ny app anao nefa tsy very ny hafainganam-pandehany.
Miorina amin'ny plugina - Ny firafitra modular dia mahatonga ny WYSIWYG HTML tonian-dahatsoratra mahomby kokoa, mora azo, manitatra ary mitazona.
Mpanonta marobe amin'ny pejy iray - Mpanonta lahatsoratra iray na folo amin'ny pejy iray ihany? Tsy hahatsapa fahasamihafana ianao, apetraho fotsiny izy ireo mba hatao voalohany amin'ny tsindry.
HTML 5 - Froala Rich Text Editor dia namboarina manaja sy manararaotra ny fenitra HTML 5.
CSS 3 - Inona no fomba tsara kokoa hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa noho ny fampiasana CSS 3? Ny vokany misimisy kokoa dia mahatonga ny tonian-dahatsoratra ho lehibe kokoa.
Froala Editor Fitaovana finday
Android sy iOS - Fitaovana Android sy iOS notsapaina ary tohanana.
Hanova ny haben'ny sary - Froala Rich Text Editor no mpanonta HTML WYSIWYG voalohany misy habe amin'ny sary izay miasa na amin'ny finday aza.
Hanova ny haben'ny horonan-tsary - ny voalohany mampiditra resize ny horonan-tsary na dia milalao aza izy ireo. Ary mazava ho azy, mandeha amin'ny finday koa izy io.
manaiky Design - Ho mavitrika ny atiny izay ovainao. Ny mpampanonta HTML WYSIWYG azon'izy ireo dia mahazaka ny haben'ny sary amin'ny alàlan'ny isan-jato.
Fitaovana amin'ny haben'ny efijery - Sambany amin'ny tonian-dahatsoratry ny lahatsoratra manankarena no azo amboarina ho an'ny haben'ny efijery isaky ny haben'ny efijery.
HTML madio - Froala dia namorona algorithm iray izay manadio ho azy ny vokatra HTML an'ny mpanonta lahatsoratra manan-karena. Manorata tsy misy ahiahy, ny editor WYSIWYG HTML dia mamokatra vokatra tena madio, miandry ny handehanan'ny motera fikarohana.
Support Alt Tag Alt - Ny sary hafa dia ny lahatsoratra aseho raha tsy afaka mampiseho ilay sary ny browser. Io koa ilay lahatsoratra ampiasain'ny motera fikarohana, koa aza atao ambanin-javatra. Ny lahatsoratra hafa dia azo apetraka ao amin'ny fanontana sary pop-up.
Fanohanana ny lohateny lohateny Link - Na dia tsy fantatra aza ny lohatenin'ny rohy misy fiatraikany lehibe amin'ny SEO, dia manampy ireo mpampiasa hivezivezy mora kokoa amin'ny tranokalanao izany. Tsy dia zava-dehibe, fa tsara ny manana. Apetraho ao amin'ny popup popup ny lohateny rohy.
Fitaovana fiarovana an'ny Editor Froala
Froala WYSIWYG HTML Editor dia manana rafitra fiarovana matanjaka amin'ny fanafihana XSS. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia tsy mila miahiahy mihitsy ianao amin'izany, fa mbola mamporisika anao izahay mba hanao fanamarinana fanampiny amin'ny mpizara anao.
Miaraka amin'ny fanohanana endri-javatra HTML rehetra, ny tonian-dahatsoratra dia nadika tamin'ny fiteny 34 samy hafa, manana ny fanohanan'ny RTL miaraka amin'ny fitiliana automatique, ary ny Spell Check.
Froala aza manana WordPress plugin hampidirina ao amin'ny tranokalanao WordPress ilay mpamoaka lahatsoratra.
Andramo ny Froala's Online HTML Editor Ampidino Froala
Tags: mpamoaka lahatsoratratonian-dahatsoratra hainganatonian-dahatsoratra htmlmpanonta lahatsoratra manan-karenatonian'ny lahatsoratratonian-dahatsoratra wordpressFandrarian-dahatsoratra marevakampamoaka lahatsoratra